Gbasara Anyị - Ebumnuche Anyị | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Mmekorita imegide nkuzi mmekorita nwoke na nwanyi
AHUSE “Iguzo ọtọ maka ikike ndị nne na nna”
A na - eme CAESE (Coalition megide Achọghị Nkụzi Mmekọahụ) na Jenụwarị 2018 iji mee ka otu dị iche iche guzobere n'ihi ọtụtụ ndị nne na nna na-aza n ’mkpughe nke ihe ezighi ezi nke Mmụta Mmekọ Mmekọahụ dịka nke a kpọrọ na mbụ ụlọ akwụkwọ nchekwa. guzosie ike na ịbụ usoro mgbochi iji ike emegbu mmadụ. Agbanyeghị, ọ bụ mmemme na-ekwesịghị ekwesị nke e mere iji mee ka ụmụ akwụkwọ meghee ihe gbasara omume mmekọahụ. N'ihi ụfọdụ elebara ọha na eze anya gara aga, emepụtagoro mmemme a ugboro ugboro ma tinye ya n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ n'okpuru ọtụtụ aha dị iche iche. Ma isi echiche na ihe mgbaru ọsọ bụ otu ihe.
Ihe omume a ezighi ezi ka ewee nye ndi umu akwukwo akwukwo akwukwo. O nwere ihe ndi di na ya na nmekorita nwoke na nwanyi, kuziri ya n’ezi omume, na-agba umu akwukwo ume inyocha nmekorita ha. Emejuputala mmemme a n’obere isi ihe nke mere na o nweghi ike iwepu nwata akwukwo site na ihe omume a n’emebighi akwukwo ha.
Ọ bụ ebumnuche nke CAUSE iji mee ka ọha na eze mara ihe dị na mmemme a n'ụzọ ọ bụla dị irè ma kwesịkwa, yana ebumnuche kachasị nke ịgba mbọ hụ na ndị na-enye agụmakwụkwọ wepụrụ mmemme a kpam kpam ma jiri ezi mmegide na-eji ike emegbu ya. CAUSE bu n’obi ịchụso ikike ndị nne na nna, ebe ihe omume ọ bụla n’ụlọ akwụkwọ nwere mmekọahụ na-eme ka ndị nne na nna mara nke ọma. Ijikwa hụ na mmemme mmekọahụ ọ bụla dị n'ụdị nne na nna na-ejigide ikike ọ bụla, na-enweghị asị na agụmakwụkwọ ụmụ ha, wepu ụmụ ha na klas ndị dị otú ahụ.
Anyị na CAUSE na-ekwupụta na mmadụ niile ha nhata.
Anyị na-ekwenyekwa na, n'ime iwu Australia, mmadụ niile nwere ikike ibi ndụ ha dịka ha chọrọ.
Ọzọkwa, anyị kwenyere na e kwesịrị ịzụlite ụmụaka n’ime omume ọma dị ka ndị mụrụ ha na-ezi.